LinkedIn nweta Onwe ya na akụkọ ya | Martech Zone
N'ime oge na-adịbeghị anya, anọ m oge dị ukwuu na LinkedIn karịa netwọkụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Enwetara m oge na-adịbeghị anya na akaụntụ adịchaghị ka m wee nwee ike nyochaa onye na-enyocha profaịlụ m yana melite arụmọrụ nke ịkparịta ụka n'withntanet na òtù ndị a lekwasịrị anya. Akaụntụ adịchaghị nwere atụmatụ ọzọ nke otu nhazi usoro na echiche ka mma na nsonaazụ ọchụchọ. Nzuzo di elu, ihe edeturu na LinkedIn emeela ka odi nma - achoputara m onwe m itinye uche na email obula ha zipuru.
Nke a bụ echiche m, mana ekwenyere m na LinkedIn na-esi n'okporo ụzọ azụmaahịa na-azụ ahịa na ịzụlite ikpo okwu ya na usoro ịkparịta ụka na-arụ ọrụ ọkachamara. Mgbasa ozi ohuru ha, Sere Onwe Gị, hones na usoro a site na iji akụkọ ịkọwapụta etu esi eji ikpo okwu ha. Sarah Acton, onye isi ahia ahia na LinkedIn dere banyere usoro di na blog ya.
Dị ka ahịa Apple ihe ị nwere ike mezuo na ngwa na ngwaike ha, LinkedIn na-ere ahịa ihe ị nwere ike nweta mgbe ị jiri usoro ha. Iji ezigbo ndị otu na ezigbo akụkọ dị egwu bụ ihe ịtụnanya dịka ọ na-emetụ ndị na-ege ntị ntị - isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma n'azụ usoro ịzụ ahịa akụkọ.
Mgbasa ozi nke LinkedIn Onwe gị gosipụtara ụzọ pụrụ iche maka LinkedIn, ebe ọ bụghị naanị na ọ na-eme mmemme nke ndị otu LinkedIn (ihe karịrị nde 300 gburugburu ụwa), kama ọ na-agabiga akụkụ ọrụ nke profaịlụ LinkedIn ma na-egosipụta mmetụta uche na-esite na ịmezu ebumnuche ọrụ. na njem iji mezuo ebumnuche nwata. Mgbasa ozi a bụ nke mbụ LinkedIn na-eji ezigbo ndị otu maka mkpọsa ahịa, na-egosi ndị òtù LinkedIn 9 dị ugbu a na akụkọ ha maka mkpọsa ahụ. Site na mkpọsa ọhụrụ a, LinkedIn na-akọwapụta onwe ya ọ bụghị naanị dị ka ngwa ọrụ ọkachamara, mana compass omume na-egosi etu LinkedIn nwere ike isi kpalie ndị ọrụ wee wulite mmekọrịta bara uru.
Agwara m ọtụtụ ndị ọrụ ibe m ka ha rụọ ọrụ ma mezie profaịlụ LinkedIn ha, gbasaa ọdịnaya ha na-ekerịta ebe ahụ, ma rụọ ọrụ netwọkụ ha. Dịka onye nwe azụmaahịa n'onwe m, amaara m na uru azụmaahịa m bara bụ maka uru nke netwọkụ m. LinkedIn bụ ụzọ kachasị mma nke ọkachamara ọ bụla iji chịkwaa akara aka ha, dọta ndị na-ege ntị ziri ezi, ma jikọọ ha iji nweta nsonaazụ azụmaahịa ha na-atụ anya ya.
Anyị na-adụkwa ndị ahịa anyị ọdụ ka ha kọọ akụkọ dịka isi ihe gbasara ọdịnaya na atụmatụ ha. Ike ịnakọta akụkọ - site na ederede, onyonyo, ma ọ bụ vidiyo, n'oge a dị mfe. Na ka ị na - akọ akụkọ ị nwere ike ịkọ, ọ ga - akawanye mma ohere ndị ga - achọ ị nweta ahịa ga - ele ya ma tinye ya na akụkọ ahụ n’ihi na ọ dịka ọnọdụ ha. Ikwu okwu banyere njirimara gi ma obu uru gi bu otu ihe, ma inwe ndi ahia ikwurita otu esi gbanwee ahia ha ma obu ndu onwe ha!
Ana m atụ anya ịhụ nsonaazụ nke ika a na usoro ịkọ akụkọ! Ọ bụrụ n’ịchọrọ, ị nwere ike ịkekọrịta akụkọ gị na LinkedIn site na itinye ya na ala nke ha Sere Onwe Gị peeji mkpọsa!
Tags: njikwa akaraahia ahiaLinkedInVidio Ahịasee onwe gisarah actonịkọ akụkọ